FTTH from Yadanabon Teleport — MYSTERY ZILLION
FTTH from Yadanabon Teleport
ရတာနာပုံ တယ်လီပို့စ်က Fiber to the Home သရုပ်ပြ ရှင်းလင်းပွဲကို ဒီနေ့ မန္တလေး ဆီဒိုးနား ဟိုတယ် မှာ ပြုလုပ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ အချိန် အတိအကျ ရေး မထားလို့ နေ့လည် ၁၂ မှာ သွားတော့ သူတို့ သရုပ်ပြ ရှင်းလင်းတာကိုတော့ မမှီတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သရုပ်ပြ ထားတဲ့ တီဗွီတွေ အင်တာနက် သုံးရတာတွေတော့ ရှိနေသေးတဲ့ အတွက် စမ်းသပ် အပြုသုံးပြု ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ (စမ်းသပ် သုံးတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တိုင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စက်က နှစ်လုံးထဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရှေ့ က သူ စမ်းနေတာကို ဘေးကနေကြည့်ခဲ့ရတာပါ။ ) အင်တာနက် သုံးတာကတော့ Web page တွေ ကျတာကတော့ Loading page ကို မစောင့်ရပါဘူး ။ ချက်ခြင်းပဲ ကျပါတယ်. ။ ဒေါင်းလုပ် စပိက တော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ မော်ဇီလာ နဲ့ ဆွဲ တဲ့ အခါ 88.2 kb/s က ကို မတက်ပါဘူး။ တခါတလေ. 40 လောက် ကို ရောက်သွားပါသေးတယ်။ လိုင်းတပ်ဆင် ခ အနေနဲ့က တော့ အပြီးအစီး ကိုးသိန်းပါ။ နောက်ထပ် ကြိုးဖိုးတွေ ဘာတွေ ထပ်ပြီးတော့ မပေးရတော့ပါဘူးတဲ့။ နှစ်စဉ်ကြေးက တော့ ခြောက်သောင်းပါ။ Speed နဲ့ လစဉ်ကြေးတွေအနေနဲ့ကတော့ အရင်က ကြော်ငြာ ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ မန္တလေး ကို ရမယ်ဆိုတာကတော့ လေးလ ပိုင်းကုန် မှ ကြိုးစ သွယ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အရင်က သုံးနေပြီဆိုတာတွေက တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ရန်ကုန်ကိုတော့ (၇) လပိုင်းလောက်မှ ကြိုးစဆွဲ မယ်လို့ ကြားပါတယ်။ ယခုတော့ ပြင်ဦးလွင်မှာ လိုင်း ဘယ်လောက်ချပေးနေပြီ ဆိုတာကတော့ လျှောက်လွှာ ကိုလက်ခံ နေပြီလို့ ပြောတာ ပါ။ လိုင်းသွယ်ပြီးလို့ စသုံး နေပြီဆိုတာ ကိုတော့ မပြောပါဘူး။ သူတို့ ပေးမှာကတော့ အမြင့်ဆုံး 2M ထိပဲ ပေးမှာပါ။ (တကယ်တန်း အပြည့်အ၀ ရမရ ကိုတော့ မသေချာဘူး။ အာမ မခံ ဘူး လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကတော့ နီးစပ် ရာက သတင်းလေးပါ။ ရှူး... တိုးတိုး... ) ဒီနေ့ သူတို့ ေ၀လိုက်တဲ့ ကြော်ငြာလေးကိုတော့ သိရအောင် လို့ စကန်ဖတ်ပြီး အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်မယ်နော်...
အင်းတိုက်တိုက်ဆိုင် ကျနော်လဲဒီနေ့ အပြင် သွားတော့ ယုဇန ပလာဇာနားမှာ လမ်းပေါ်မှာ ဆိုင်းဘုတ်လေး တခု ချထားတယ်ဗျ။မြေအောက် ဖန်ချည်မျှင်ကြိုး ချနေသည်တဲ့။အဲဒါနဲ့ Fiber optic cable ကိုမမြင်ဘူးတာနဲ့ ကားပေါ် ကဆင်းကြည့်တာပေါ။့ဆင်းလဲ ကြည့်ရော fiber cabel က UTP cat5လို အထဲမှာကြိုးတွေလဲမပါဘူး။ဘယ်လိုလေးလဲမသိဘူး။အထဲမှာ အခေါင်းကြီး။ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ လုပ်တော့ပေးမရိုက်ဘူးဗျ။ပေးကြည့်တာတောင်လွန်လှဘီတဲ့(ဘာမှမဟုတ်ဘူးတပ်နံပါတ်နဲ့ကားမို့ပေးကြည့်တာ. )။ဓါတ်ပုံရိူက်ပီးတင်ပေးချင်ပေမယ့်မတင်လိုက်ရဘူး။
မော်ဇီလာ နဲ့ ဆွဲ တဲ့ အခါ 88.2 kb/s က ကို မတက်ပါဘူး။ တခါတလေ. 40 လောက် ကို ရောက်သွားပါသေးတယ်။
is it 512 KB plan ? I think so =D
IE နဲ့ Kasper Update 132 MB ကိုဆွဲတာ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတယ်။ 160 kb/s တစ်ခါတစ်လေ 140 kb/s ကိုရောက်တယ်။ မန္တလေးပွဲမှာပါ။
အစ်ကို တို့ကိုတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ အဲဒီ FTTH က ဆိုင်ဖွင့်ချင်ရင်ရော ဖွင့်ခွင့်ပေးသလားလို့ပါ။ အစ်ကို zawtk တင်ထားတဲ့လက်ကမ်းစာစောင်ထဲမှာတော့မပါဘူးဗျာ့။ MTP မှာဆိုရင်တော့ PAC ဆိုတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။ သူကတော့ personal လို့ဘဲတွေ့ရပါတယ်။